Hot & okusha
Ikhishi isitsha Setha
Ice ugqoko & cube
Bathing Ibhulashi & Acashile kobuso
Coin Isitoreji Bag
Izingane Baby uchungechunge
Silicone ingane ibhibhi
Ugwayi Case & isitsha somlotha kagwayi
Jution Silicone & Rubber (Dongguan) Co., Ltd kuyinto Umkhiqizi Professional ngokukhethekile asathuthuka futhi yokukhiqiza imikhiqizo abicah, lisasetshenziswa kabanzi kitchenware futhi Housewares. Yaqalwa ngo-2005, elise "Factory Kwezwe" --DongGuan City. Factory ihlanganisa indawo square metres phezu 8,000, phezu opharetha 150 onekhono. It isidlulile SA8000 2014, ISO9001: 2015, ISO14001 2014; futhi thina wathola " lolusetulu okusha Technology Enterprise " we Country ngo-2016.
Manje ifektri is kwakuba ubunjiniyela Design ithimba eliqinile; ngokunemba isikhunta yokukhiqiza workshop; Post-ukwakha umnyango; umnyango QC, kusho uMnyango emaphaketheni. Nge 3 amasethi eziphambili CNC machining izikhungo kanye 3 amasethi EDM inhlansi machine for tooling; 30 amasethi Post-ukwakha umshini ngokukhiqiza, phezu 10 Ukuphrinta Ikani umugqa, naye wayenezimvu elikhulu Uthuli-free Ukupakisha workshop.
Nge anamandla amakhulu aphakeme kwamakhasimende, senza ukuhlolwa yonke imikhiqizo, izinga iye ngempumelelo evikelwe. Asikwazi ukwakha kanye nemikhiqizo enza ngokusho isicelo amakhasimende '. Imikhiqizo yethu ngabe athengiswe emazweni angaphezu kuka-30 kanye nezifunda, ne-Disney, Coca-Cola, Nestle, Marlboro, Line Abangane, Daiso, Sawubona-Kitty, L'OCCITANE kanye namanye amakhasimende omhlaba bodumo.
Imboni bekulokhu umoya "izinga lokuqala, ikhasimende kuqala, intuthuko eqhubekayo" isimiso. Abazithobayo ukuhlinzeka okusezingeni eliphezulu imikhiqizo ejwayelekile futhi inkonzo eyanelisayo kumakhasimende. Inkampani bakholelwa ngokuqinile ekutheni nge eqinile, nokubambisana ngobuqotho futhi umoya ngcono okuqhubekayo, ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ukujabulela benamanzi, ikhwalithi kanye ukulethwa isikhathi.
Silicones abonise characteris eziningi ewusizo ...